IPOB: Anyị amaghị ihe ọ bụla gbasara Python Dance - Ndị Gọvanọ ọwụwa Anyanwụ | odumblog
posted on Aug. 31, 2019 at 9:31 pm
Ndị gọvanọ ọwụwa anyanwụ agọọla agụgọ banyere ịma ihe ọbụla gbasara Python Dance n’ụbọchị Satọdee. Cheta na e boro ndị agha Naịjirịa ebubo na ha gburu ndị otu Indigenous People of Biafra n’ Afara-Ukwu, Umuahia, Abia State, ụlọ nke onye ndu onye isi otu ahụ bụ Nnamdi Kanu na n’ọnwa Septemba 2017.
Ndị IPOB ṅụrụ iyi na ha ga-awakpo ndị gọvanọ na ndị isi ndị Igbo n’ebe ọ bụla ná mpụga mba ahụ, n’ihi na ha na gọọmentị etiti jikọrọ aka gbu ndị otu ha n’oge ndị agha na-arụ ọrụ Python Dance.
Ndị nta akụkọ nwere mgbe ọgbakọ ndị gọvanọ ya na ụfọdụ ndị Igbo nwere mmachi ebe Minista nke ụgbọ elu, Hadi Sirika, Onye isi oche ndị ọchịchị South East na Gọvanọ Ebonyi steeti, David Umahi kọwara na ndị gọvanọ ahụ akpọghị ndị agha na South East maka Python Dance.
N’okwu nke Umahi, “Ndị gọvanọ South East anabataghị ndị agha ma ọ bụ na a gwakwara ndị ọchịchị South East banyere ọrụ ọ bụla ha na Python Dance ruo mgbe amalitere ọrụ ahụ na steeti ahụ. Ndị gọvanọ South East ga-achọ idegara Onyeisiala rịọ ka ya na ndị isi ndị ọrụ nchekwa nwee ọgbakọ iji mee ka esemokwu kwụsị na mpaghara ahụ. “
Tags:BIAFRAbreaking newsBuhariElectionIgbo blogIgbo NewsNaija celebritiesNigeriaPolitics Nigeria
Bishop egosila mwute maka ogbugbu ụkọchukwu na Taraba